नेपाल स्काउटका पदाधिकारी भ्रष्टाचार उन्मुखः राष्ट्रिय सहायक प्रशिक्षक अधिकारी | KTM Khabar
२०७३ मंसिर २३ गते १९:२६ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । नेपाल स्काउटसंग लगभग दुई दशक संलग्न सामाजिक कार्यकर्ता हुन देवदुत अधिकारी । उनको अन्य व्यक्तित्व पनि समाजमा परिचित छ तर स्काउटिङ् ब्यक्तित्वमा उहाँको राम्रो प्रभाव छ । उनै समाजसेवी नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय साहायक प्रशिक्षक तथा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला आयुक्त देवदुत अधिकारीसंग केटिएम खबर डट कमका लागि रवि भट्टराईले गरेको कुराकानीको संपादित अंशः
सन्चै हनुहुन्छ र ?
म आरामै छु ।
स्काउटिङ् भनेको के हो ?
स्काउटिङ् एउटा शैक्षिक अभियान हो । यसमा हामिले युवा, युवती तथा प्रौढहरुलाई अथवा विशेष गरेर युवाहरुलाई हामिले समाजका कर्णधार हुन भन्ने हिसावमा उनीहरुको शारिरिक, मानशिक र वौद्धिक विकासको लागि स्काउटले भुमिका खेल्ने र समाजमा धैर्यवान, अनुसाशित र उनीहरुको चरित्र निर्माणमा भुमिका खेल्ने काम गर्दछ ।
स्काउट सामाजिक संस्था हो ?
स्काउट सामाजिक संस्था भन्दा पनि यसका आफ्नै नियमहरु छन् । आफ्नै नियम तथा नियावलिहरुमा यो चल्ने गर्दछ तर आम पब्लिकमा सामाजिक संस्था भन्ने बुझाई छ । यो विश्वभर रहेको छ, एक दुई देशमा बाहेक यसको पहुँच विश्वभर छ । यो एउटा शैक्षिक अभियान हो । जसले बिशेषत युवाहरु लक्षित अभियानहरु चलाउने गर्दछ ।
तपाई कति समय देखि यो अभियानमा संलग्न हुनुहुन्छ ?
म १७ बर्ष देखि निरन्तर स्काउटमा संलग्न छु र यो जारी रहने छ । पुरै समय त यसलाई दिन सकिदैन, यसलाई अन्य कामबाट बाचेको समयमा म यो अभियानमा संलग्न हुन्छु ।
भुकम्प पश्चात तपाईको अभियान अझ समाजमा परिचित भयो हो र ?
पहिला पनि हामी सक्रिय थियौ तर त्यो माहा विपत्ति जव आई पर्यो, हामी सक्रिय रुपमा लग्यौ र हाम्रो अभियानलाई समाजले नजिकबाट देख्यो यसैको परिणाम भनौन तपाईले मलाई यो अन्तरवार्तामा ठाऊ दिदै हुनुहुन्छ ।
तपाई सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको आयुक्त, स्काउटमा यती लामो यात्रा तय गरि सक्नु भयो, नेपाल स्काउट अहिले कस्तो अवस्थामा छ ?
राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो । अहिले म सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको आयुक्त छु । महाभुकम्प जाँदा जती सिन्धुपाल्चोकमा क्षति भएको थियो त्यो सबैलाई थाहा छ तर नेपाल स्काउटले जसरी सक्रियता देखाउनु पथ्र्यो त्यहाँ स्कउटले भुमिका खेल्न सकेन, आयुक्त भएको हिसावले मलाई प्रश्न उठ्न सक्छ तर यथार्थ त्यस्तो हैन, मलाई केन्द्रले बाईपास नै त नभनौ तर जती विश्व स्काउटबाट डोनेशनहरु आए तर आयुक्तहरुलाई वोलाएर सरसल्लाह गर्ने वातावरण त्यति खेर बन्न सकेन शायद हामीले छलफल गरेर अर्थात नेपाल स्काउट केन्द्रले छलफल चलाएर काम गरेको भए वास्तबमा अशली पिडितले राहत पाउने थिए । यहाँ त करौडौको महलमा बस्नेहरुले त्रिपाल पाए, घर भत्किएकाहरुले पाउन सकेन् ।
तपाई आफै आयुक्त अनी यसरी जिम्वेबारीबाट बाहिर निस्कन मिल्छ त ?
हैन, त्यसरी नबुझि दिनुहोस, मैले भन्न खोजेकोयती हो, नेपाल स्काउट केन्द्रमा करोडौ डोनेशन आए तर कहाँ गए ?, हो केन्द्रले वास्तबमा सही ठाउँमा डोनेशन पुर्याउन सकेन । छलफलको वातावरण नै बनाएन, मेरो ब्यक्तिगत पहल कदमीमा जती कुदे, दौडिए तर केन्द्र नेतृत्वले गर्न सकेन भन्ने मेरो निष्कर्स हो ।
नेपाल स्काउट केन्द्रले भनौन नेतृत्वले तपाईलाई बाईपास गर्यो, हो ?
भने नी, अब बाईपास भन्ने की के भन्ने, म आयुक्तको हैशियतमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बारेमा मलाई बोलएर छलफल गरेर अगाडी बढ्नु पर्ने त हो नि तर मलाई मात्रै हैन अन्य साथीहरुसंग पनि त्यो वातावरण श्रृजना हुन सकेन यसलाई खै के भन्ने बाईपास भन्ने हो या नेतृत्वको कमजोरी । यो तपाईहरुले ठम्याउने कुरा हो ।
केन्द्रबाट त्यसो भए आयुक्तहरुलाई सोधिदैन हो ?
भनिसके, जहाँ जहाँ सवारी साधन पुग्छ, त्यहा त्यहा केन्द्रका पधाधिकारीहरुको सवारी हुन्छ आफन्त र आफु निकटसंग केन्द्र नजिक भएजस्तो मलाई लाग्छ तर यो प्रवृतीको अन्त्य हुन जरुरी छ । आशा छ यो प्रवृतीको अन्त्य हुन्छ ।
तपाईलाई स्काउटका पधाधिकारीहरु प्रती यत्रो गुनासो रहेछ, अब के गर्नु हुन्छ ?
गर्न त के गर्ने, सत्य र तथ्यका पक्षमा म सधै उभिन्छु र मैले भन्ने गरेको छु महाभुकम्पका बेला करौडौ डोनेशन नेपाल स्काउटलाई आएका छन् । त्यसको छानबिन हुनै पर्छ र दोशिलाई कडा कारवाही हुनु पर्छ ।
भनेपछी स्काटमा भष्टाचार भएको छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो, राम्रो प्रश्न सोध्नु भयो स्काउटको केन्द्रीय गतिविधी हेर्नु हुन्छ भने व्यापक आर्थीक भ्रष्टाचार भएको छ । नेपालस्काउटका आम्दानी श्रोतहरु छन्, लाखौ मासिक आम्दानी हुने गर्छ तर त्यसको हिसाब किताब देखाईदैन, अघिल्लो आयुक्तबाट प्रत्येक छ महिनामा स्मारिकाहरु निकालेर जानकारी गराईन्थ्यो तर अहिले त्यो हुन सकेको छैन । त्यसैले मेरो नै पहलमा अख्तियारमा, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा र सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको छु । मन्त्री ज्युलाई पनि भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएको छु । शायद यसको छानबिन हुन्छ र सत्य तथ्य वाहिर आऊँछ ।
अवको समाधान चाहिँ के हो ?
स्काउटका आफ्नै ऐन र नियमहरु छन् । यो कार्य समिति नियममा चलिरहेको छैन । साथीहरु नियममा चलेका छैनन् । मेरो आवाज भनेको कानुन संवत कार्य समिती गठन हुनुपर्यो र आर्थिक पारदर्शिता हुनु पर्यो भन्ने हो र अव नियम अनुसार पदाधिकारीको निर्वाचन हुनु पर्यो । अहिलेका अध्यक्ष जो हुनुन्छ उहाँ पनि स्काउटमा धेरै संघर्ष गरेर त्यो ठाउमा पुग्नु भएको हो । उहाँ प्रती गुनाशो छैन । मैले प्रवृती प्रती गुनाशो गरेको हुँ । अबको निकाश भनेको नियम र कानुन संवत चुनाव गराएर नया कार्य समितीलाई जिम्वेवारी हस्तान्तरण गर्नू नै निकाश हो । त्यसैका लागि मैले आवाज उठाएको हुँ । हैन यो टिके प्रवृती मान्ने हो भने निकाश सम्भव छैन यो कार्य समिती बैधानिक पनि छैन र अहिलेको मध्यमार्गिय बाटो भनेको नै नेपाल स्काउटका पदाधिकारीहरुको राजिनामा हो अनि निर्वाचनमा जानु हो ।
धन्यवाद तपाईहरुले मेरो विचार पस्कने मौका दिनु भएकोमा ।
देवदुत अधिकारीसंगको भिडियो कुराकानी हेर्नका लागि तल क्लिक गर्नुहोसः